Sandesh Prabhahहामी किन वार्तामा आइरहेका छौँ ? :अनिल शर्मा Sandesh Prabhah
हामी किन वार्तामा आइरहेका छौँ ? :अनिल शर्मा
सरकारले नेकपासँग वार्ता गर्न चाहेको भरपर्दो छनक दिएपछि हालै नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो । त्यसले वार्ता सम्बन्धी आवश्यक नीति, वार्ता टोलीको निर्माण र गन्तव्य तय ग¥यो । जुन विषयलाई रणनीतिक संयुक्त मोर्चा र नागरिक सहभागितामा गराइनेछ र उनीहरुको अपेक्षा र आदेश (अनुमती) लिँदै गइनेछ ।
ओली र प्रचण्ड मिलेर नै प्रतिबन्ध लगाए । ओलीले प्रशासन र प्रचण्डले पार्टी पङ्तीलाई गुप्तचरको हैसियतमा प्रयोग गरे । यद्यपि प्रहरी, न्यायालय र कार्यकर्ताले सरकार र आफ्नै नेताको आदेश र चाहना स्वीकार गरेनन् । उनीहरु ‘गुईँठाको आगो’ बचाउन अगाडि आए । सरकार आज विनाशर्त वार्तामा बस्न तयार भयो ।जनताको आलोचना र अपजस (जनबोलीमा पाप पखाल्न) टार्न ओली सरकार प्रतिबन्ध हटाउन र वार्तामा बस्न राजी भएको हो
जनयुद्धको मुद्दा छाडेर प्रचण्ड सत्तापक्ष भएका थिए । विद्रोही वा जनयुद्ध पक्षको नेता पनि उनै थिए । त्यही दोहोरो सत्ता कब्जा गरिरहन प्रचण्ड सुरुमै विप्लव र नेकपालाई देखाउन मैदानमा उत्रिएका थिए । प्रतिबन्ध लगाउन ओलीलाई उक्साएका थिए । केपी ओली माक्र्सवादको पक्षधर नै होइनन् । उनको हर्कत र बुझाईमा को के बहस गर्नु !
संवाद गर्ने त मालिक !’
(विरही नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको भूमिगत विप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।) श्रोत:अनलाइनखबर